Shiinaha 5 1 Tubes Filler Iyo Sealer HX-005 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Mashiinka HX
Buuxinta Range 1-10ml 5 bambooyin
Awood 10-15pcs / min
Dhererka Tubada 50-100mm
Isticmaalka Hawada 0.35m3/ min
Cabbir L1300 * W1010 * 1550mm
* Mashiinka waxaa si gaar ah loogu talagalay 5kiiba 1 tubbo, oo ku habboon wax soo saar ballaaran oo 5 ah 1 tubbo ah.
* Gacanta ka saar quudinta tuubada, buuxinta 5 nozzles otomaatig ah, xiritaanka, goynta dhamaadka, iyo tuubada mashiinka otomaatigga ah ayaa la soo baxa.
* Wuxuu korsadaa tiknoolajiyada wax lagu xiro ee loo yaqaan 'ultrasonic sealing technology', looma baahna waqti diirimaad, xasilooni iyo xasillooni hagaagsan, dhalanrog la'aan iyo diidmo hooseysa oo ka yar 1%
* PLC oo leh nidaamka xakamaynta shaashadda taabashada ee leh qalabka digniinta ayaa si toos ah u eegi kara macluumaadka alaarmiga ee shaashadda taabashada, waxay heli kartaa dhibaatada isla markaana si dhakhso leh u xallin kartaa.
* Saldhig kasta waxaa lagu maamuli karaa si madax-bannaan shaashadda taabashada, oo saaxiibtinimo u leh hagaajinta mashiinka. Shaqaaluhu waxay isticmaali karaan hal tuubo oo kaliya si ay u dhigaan dhammaan jagooyinka, iyagoo keydsanaya waqti badan iyo qalab.
* Jaangooyo ku qalabaysan nidaamka bamka peristaltic, buuxinta saxsanaanta sare, oo ku habboon buuxinta dareeraha.
* Nidaamka tilmaamida Cam wuxuu si sax ah ugu meeleyn karaa lix xarumood oo shaqeeya.
* Tuubo la'aan, buuxin la'aan, tuubbo la'aan, shaqeyn la'aan shaabad, yaraynta walxaha tuubbada, mashiinka iyo luminta caaryada.
Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay cuntada, daawooyinka, qurxinta, iyo kiimikada 5 ee 1 tuubada buuxinta iyo daboolida, mugga 1-10ml.
1. Bambooyin dhoobada ah oo loogu talagalay kareemka dareeraha hooseeya iyo nuxurka
2. Pneumatic ceram bambooyin loogu talagalay kareem aad u sarreeya
Hore: Mashiinka Buuxinta Ceymiska Sumcad sare - Mashiinka Buuxinta Tooska ah Iyo Mashiinka Mashiinka HX-20AF - HX Mashiinka
Xiga: Semi Automatic Ultrasonic Tube Sealer ee Tubada Gaarka ah HX-003